Injiil ee 2 Minutes — TRIP LEE - SITE RASMIGA AH
Injiil ee 2 Minutes
Waa Maxay Injiil? ka waxay doonayaan Ilaah on vimeo.
clip kale oo aan ka wareysi la waxay doonayaan Ilaah. Waxay i weydiiyay haddii aan raab yaabaa Injiil ee 2 daqiiqo. Tani waxay ii ahayd isku day
Rikki Lewis • August 19, 2013 at 8:54 waxaan ahay • Reply
Loveandwar09 • August 19, 2013 at 8:54 waxaan ahay • Reply
Love halkan waa
W. Lynn Oriente • August 19, 2013 at 8:54 waxaan ahay • Reply
dabcan aad baan u jecelahay. :)
Tina • August 21, 2013 at 10:54 waxaan ahay • Reply
Stacie • January 30, 2014 at 12:12 pm • Reply
Dang ... si qurux badan. Waxaan jeclahay in aad hadalkay on Titus sidoo…